Hotelka Wehliye: 14 ruux ayaa ku geeriyootay qarax xooggan oo galabta ka dhacay agagaarka… – idalenews.com
Illaa 14 ruux ayaa ku geeriyootay qarax xooggan oo galabta ka dhacay agagaarka Hotelka Wehliye ee Wadada Maka Al-Mukarama, iyadoo khasaaraha ugu badan uu soo gaaray dad rayid ah.
Goobjoogayaal ayaa sheegaya in gaariga qarxa uu qof kaxeynayay, kaasoo goobta istaagay, wax yar kaddibna uu qarxay, waxaana khasaaraha ugu badan uu gaaray Bajaaj wadada marayay oo gaarayay in ku dhow shan bajaaj.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga C/casiis Xildhibaan ayaa sheegay in 14 ruux ay ku dhinteen 8 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa oo ahaa mid xooggiisa laga maqlay degmooyin ka mid ah Muqdisho.
Halka uu qaraxa ka dhacay oo ka soo horjeeda Hotelka Wehliye waxaa dhow jeer oo hore ka dhacay qaraxyo, waa goob aad u mashquul badan oo ay ku yaallaan maqaayad iyo dukaamo ganacsi.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyada qaraxa ka dhacay agagaarka Hotelka Wehliye, iyadoo sheegtay inay ku dishay mas’uuliyiin iyo saraakiil amni, hase ahaatee dadka ugu badan ee ku dhintay ayaa ahaa dad rayid ah.
ruux ayaa ku geeriyootay qarax xooggan oo galabta ka dhacay agagaarka Hotelka Wehliye ee Wadada Maka Al-Mukarama, iyadoo khasaaraha ugu badan uu soo gaaray dad rayid ah.